ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ်(၄)ပတ်နဲ့ (၇)ပတ်အတွင်းမှာ ဘာတွေ ဖြစ်တတ်သလဲ? – BurmeseHearts
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ်(၄)ပတ်နဲ့ (၇)ပတ်အတွင်းမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရသူ အမျိုးသမီးရဲ့ ကိုယ်တွင်းအပူချိန်ဟာ မြင့်တက်လာနိုင်ပြီး အားနည်းသလိုလည်း ခံစားရပါမယ်။ ဒီခံစားရမှုတွေဟာ အအေးမိလို့ မအီမသာ ဖျားနာချင်တာနဲ့ ဆင်တူနေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သတိထားတတ်ရင်တော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်အမျိုးသမီးဟာ ကိုယ်တွင်းက ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် နို့သီးခေါင်းပတ်လည်တဝိုက်က အရောင်ဟာ ရင့်လာတတ်ပြီး ရင်သားဟာ ရောင်နေသကဲ့သို့လည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
သန္ဓေသားကြီးထွားလာတဲ့အတွက် ဗိုက်အောက်ပိုင်း နဲ့ နောက်ကျောဘက်မှနေ မအီမသာခံစားမှုတွေကိုလည်း တခါတရံ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၃၂)ပတ်မှ (၃၅)ပတ်အတွင်း ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ ဘယ်လိုလဲ?
မွေးဖို့နီးလာတဲ့ ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၃၆)ပတ်မှ (၃၉)ပတ်အတွင်း မိခင်လောင်းဟာ…
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၃၆)ပတ်မှ (၃၉)ပတ်အတွင်း ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ?
ရက်သတ္တပတ် (၃၂)ပတ်မှ (၃၅)ပတ်အတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းတွေ ဝမ်းမချုပ်အောင်…
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၃၂)ပတ်မှ (၃၅)ပတ်အတွင်း မိခင်လောင်းဟာ ဘာကြောင့်ဝမ်းချုပ်သလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်တွေ ဘာကြောင့် အလေးအပင်မခြင်း နှင့် x-ray ရိုက်ခြင်းတို့…
ကလေးမွေးလို့ ဗိုက်နာတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုခံစားမှုမျိုးလဲ?